Ukuqinisekiswa - I-Shanghai Gianty Trading Co, Ltd.
I-BPI iyisiqinisekiso esiphambili semikhiqizo esetshenziswa eMelika eNyakatho Melika. Uhlelo lwethu lokuqinisekiswa luqinisekisa ukuthi imikhiqizo nokupakisha okubonisa uphawu lwe-BPI kuhlolwe ngokuzimela futhi kwaqinisekiswa ngokuya ngamazinga asekelwe ngokwesayensi. Sigqugquzela ukusebenza okuhle kakhulu kokuphambukisa kanye nokuvuselelwa kwezinto zokubumbana ngokusebenzisa umanyolo kamasipala nowokuhweba.
Ukupakisha noma imikhiqizo enelebuli ye-OK compost INDUSTRIAL kuqinisekisiwe ukuthi ingabekeka embonini yezimbotshana zezimboni. Lokhu kusebenza kuzo zonke izakhi zawo, ama-inks kanye nezengezo. Indawo okuyiyo kuphela eyikhomba yohlelo lwezitifiketi ivumelanisiwe i-EN 13432: 2000 standard: kunoma yisiphi isisehlakalo, noma yimuphi umkhiqizo ophethe i-OK compost logo uhambisana nezidingo ze-EU Packaging Directive (94/62 / EEC).
Lesi sitifiketi sibonisa ukuthi iGianty ibhalisiwe ne-US Food and Drug Administration ngokulandela umthetho we-FDA Food Safety Modernization Act kanye neFederal Food and Drug Act, njengoba kuchitshiyelwe umthetho weBioterrorism Act, bese uthola inombolo engenhla yokubhaliswa kweFDA.
Isiqondisi se-GRC Global Standards Directory siyisizinda semininingwane sawo wonke ama-Audit awenziwe ngokuqhathaniswa ne-BRC Global Standard. Izindikimba zezitifiketi zilawula konke ukushintshelwa kuhlu lwamasayithi. amadokhumenti wokucwaninga kanye nolwazi lwesitifiketi olugcinwe kusikhwama
I-SMETA imele ama-Sedex amalungu e-Ethical Trade Audit futhi ingenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele zokuhlola izincwadi emhlabeni jikelele. Kuhlanganisa imikhuba emihle kakhulu emkhakheni wezokuzibophezela wenhlangano. Umqondo uchaza indlela esekwe kwi-Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code.
Ngokuya ngeKhomishini Regulation (i-EU) Cha 10/11 yomhla ziyi-14 kuJanuwari 2011 ngezichibiyelo zokunquma ukuthuthwa okuphelele ngabakwa-SGS.
Ngokuya nge-FDA 21 CFR 175.300, inani eliphelele lokwehlukaniswa komhlaba lihlangabezana nezindinganiso zalo yi-SGS.
I-Business Social Compliance Initiative (BSCI) Uhlelo Lokuqapha luyindlela yaseYurophu yokuthuthukisa ukusebenza kwezenhlalo emazweni abaphakeli ngesisombululo sokuqapha samazinga omphakathi.
I-Bisphenol A, evame ukwaziwa njenge-BPA ngamakhemikhali atholakala emapulasitiki aqinile nokuhlanganiswa kokudla neziphuzo zamathini ezingaziphatha ngendlela efanayo ne-estrogen namanye ama-hormone emzimbeni womuntu. Sinesitifiketi sokuthi ayikho iBPA emikhiqizweni yethu.
Izinga le-ISO 9001 lisuselwa kunqubomgomo ethile yokuphathwa kwekhwalithi. Kubandakanya ukugxila kwamakhasimende okuqinile, isisusa kanye nokuchazwa kokuphathwa okuphezulu, indlela yenqubo kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo.
I-TÜV AUSTRIA yinkampani ehamba phambili yokuhlola, ukuhlola nokuhlola isitifiketi egunyazwe umhlaba wonke ukunikela ngezinsizakalo zokubhalisa / isitifiketi seqembu lesithathu.